Arthur Chan, Author at
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုဆိုရင် မိုဘိုင်းနဲ့ ဒေတာကောက်ယူခြင်းက အတော်ကိုခေတ်စားလာပါပြီ။ မိုဘိုင်းနဲ့ ဒေတာကောက်ဖို့အတွက် အသုံးပြုလို့ရတဲ့ tool တွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ အသုံးများကြတာကတော့ open source တွေဖြစ်တဲ့ Open data kit အနွယ်ဝင် tool တွေပါ။ သူတို့တွေက များသောအားဖြင့် အခမဲ့ရသလို ဒေတာကောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ function တွေ၊ feature တွေကို သေချာစနစ်တကျသတ်မှတ်ထားတဲ့ xlsform format တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်နေရာမှာ ဖန်တီးထားရင် အခြားတနေရာမှာပါ ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Form ဖန်တီးရတာဟာ သာမာန်အသုံးပြုသူအတွက်အနည်းငယ်တော့ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ကောက်ယူချင်တဲ့ form ထဲမှာပါတဲ့ rule တွေများရင်များသလို ၊ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလက်ဝင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ဒေတာကောက်တဲ့အခါမှာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်ခုတည်းတင် […]
Arthur Chan May 20, 2019 June 21, 2019 Tips
Website တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် သိသလောက်လေးရေးချင်ပါသေးတယ်။ကွန်ပျူတာပညာရှင် အမြင်နဲ့မဟုတ်ပဲ လေ့လာသူတစ်ဦးအမြင်နဲ့ပဲရေးပါ့မယ်။ ကျွန်တော်အရင်က website တွေနဲ့blog နဲ့ကို ကွဲကွဲပြားပြားမသိခဲ့ဘူး။Website မှာဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် domain အမည်တစ်ခုရှိမယ်။ blog တွေမှာဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ blog platform တွေရဲ့ နာမည်တွေပါတတ်မယ် လို့ပဲခွဲထားခဲ့တယ်။ ဥပမာ WordPress တို့ blogger တို့ပေါ့။ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ တော့လေ့လာရင်းနဲ့ blogနဲ့ website မှာမတူတာတွေအများကြီးရှိတာကို တွေ့လာခဲ့တယ်။ Blog. ဆိုတာ များသော အားဖြင့် အလကားရတယ်။ ရိုးရှင်းတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်က သတင်းတွေ၊ မျှဝေပေးဖို့ပဲ။အလကားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျီးများလို့မရဘူးပေါ့ ။ ကိုယ်လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့မရဘူး ။ သူတို့ ပေးထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲ လုပ်လို့ရတယ်။ကိုယ်က လန်ပြန်နေတဲ့ design […]
Arthur Chan May 19, 2019 September 24, 2019 Tips
Getting direct links from Google Drive
Google Drive မှာတင်ထားတဲ့ပုံတွေကနေ တိုက်ရိုက် လင့်ယူပြီး အခြားနေရာမှာပြန်ပြတဲ့နည်းပါ Google Drive ထဲမှာ ယခင်က ဖိုင်တွေကို တိုက်ရိုက် host လို့ရပါတယ်။​ဆိုလိုချင်တာက ဓာတ်ပုံတစ်ခုကို အခြားတစ်နေရာမှာ ပြန်ပြဖို့အတွက် အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ တနေရာရာမှာ သိမ်းဖို့လိုတယ်။ဥပမာ Facebook မှာ Friend Only တင်ထားတဲ့ ပုံကို အခြား တနေရာကနေ Link နဲ့ပြန်ခေါ်သုံးလို့မရဘူး။ ပြီးတော့ Viber တို့ဘာတို့မှာတင်ထားတာတွေကိုလည်း ပုံLinkဆိုပြီးပြန်ယူလို့မရဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်တင်ချင်တာကပုံတွေအများကြီး အဲဒီတွေသိမ်းထားဖို့အတွက် နေရာရှာရတာဒုက္ခရောက်တယ်။ Google Drive လိုဖိုဒါမျိုးမှာသိမ်းပြီး Link လေးနဲ့ ပုံတိုက်ရိုက်ပြလို့ရအောင် ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ Google Drive မှာ သူ့ပုံတွေကို အခြားတနေရာမှာ ပြန်ပြဖို့ function မပေးထားဘူး။​ ဒေါင်းလုဒ်လင့်လိုမျိုး၊ […]
Arthur Chan May 9, 2019 June 21, 2019 Tutorial
Google ရဲ့ ပုံရိပ်မှ ဒီဂျစ်တယ် စာလုံးပြောင်းတဲ့ Function (update: March 2018 ကစပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ Google Lens မှာ အထက်ပါ OCR service ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ) Introduction ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ရှိတဲ့မြန်မာဘာသာ နဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပုံနှိပ်စာလုံးကနေ အလွယ်တကူ ကွန်ပျူတာစာလုံးတွေအဖြစ် ပြုလွယ်ပြင်လွယ်လုပ်လို့ရဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော့်အိမ်မက်ပါ။အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နဲ့ရေးထားတာတွေကို တော့ ကွန်ပျူတာစာလုံးအဖြစ်ပြောင်းလို့ရပြီး မြန်မာစာ ကို ရဖို့ကို တော်တော်ကြာစောင့်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျောင်းသားဘဝတုန်းက စင်ဘီယွန် သုံးနိုကီယာဖုန်းသုံးစဉ်က လိပ်စာကတ်လေးတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အလွယ်တကူ ဖုန်းစာအုပ်ထဲ ထည့်သွားတာကို တော်တော်သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။အခုတော့ ဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ နည်းစနစ်တွေပေါ်နေပါပြီ။အရင်ကလို မြန်မာ စာတွေကိုကွန်ပျူတာစာလုံးပြောင်းချင်ရင် အစအဆုံး တစ်အုပ်လုံး စာစီစာရိုက်ပြန်လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတာ ကို သိပြီးပြီးလား။ တော်တော်များများကတော့ သိကြမယ်မထင်ပါဘူး။ […]
Zapier ကို Automation tool တစ်ခုအနေဖြင့်သိထားကြပါသည်။ သူ‌၏ လုပ်ဆောင်ချက်များက နည်းပညာနှင့် မနီးစပ်သော သူတစ်ဦးအတွက်တော့ နားလည်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် များပြားလှသော Website များ၊ Application များ Tool များရှိပါသည်။ ဥပမာ Google မှထုတ်ပေးထားသော Google calendar, Google Sheet,Google Doc. ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ လူသိများသော Facebook .၊ အချို့ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ကုမ္ပဏီများတွင် သုံးလေ့ ရှိကြသော Mailchimp ကဲ့သို့သော လူတွေအများကြီးဆီကို အီးမေးလ် ပုံမှန်ပို့သည့် Service.၊ စသဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖန်တီးထားသော tool များရှိကြပါသည်။ Auto Posting Platform တစ်ခုတွင် တင်လိုက်သော post များကို […]
ဆာဗေးများကို ဖုန်းဖြင့် offline ကောက်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် ODK အကြောင်း (၁)
ODK ရဲ့အရှည်နာမည်ကတော့ Open data kit ပါ။ သူ့ကို ဆာဗေးပြုလုပ်ဖို့ ဒေတာကောက်ဖို့အတွက် သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ သိသာတဲ့ use case ကတော့ ဆာဗေးကောက်မယ့်သူတွေက ဖုန်းထဲမှာ ODK collect ထည့်ထားမယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကောက်ချင်တဲ့ ဖောင်ကို လည်းထည့်ထားမယ်။ ပြီးတော့ တကယ်ကောက်မယ့်နေရာထိ သွားပြီး လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို Gps address, အသံဖိုင်၊ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွကောက်ယူလို့ရမယ်။ ကောက်ယူမယ့်သူရဲ့ device id နဲ့အခြားအချက်အလက်တွေကိုပါတစ်ပါတည်း ဆာဗာကိုလှမ်းပို့နိုင်မယ်။ ဒါကြောင့် လုံးဝ စာရွက်နေရာကိုအစားထိုးလိုက်လို့ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ODK မှာ Form ပြုလုပ်ရတာ မလွယ်ဘူးဗျ ။ Google Form တို့မှာလို ပြုလုပ်ရလွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာတော့ သိဖို့လိုတယ်။ Form တည်ဆောက်ဖို့ […]